HERO OF MYANMAR: ဒုတိယပင်လုံနဲ့ဒေါ်စု
[23:05 |0ဦးကဆွေးနွေးသွားပါတယ်.. ]
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အကျယ်ချုပ်ကလွတ်မြောက်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာပဲ ထောက်ခံသူတွေကို စုရုံး စကားပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲမှာ နိုင်ငံရေးက လူတိုင်းနဲ့ ဆိုင်တယ် ဆိုတာနဲ့ အိမ်မှာ ဟင်းချက်နေတာတောင် နိုင်ငံရေးလုပ်နေတာလို့ ပါပါသေးတယ်။ လွတ်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာ နိုင်ငံရေး နဲ့ စပြီး နှုတ်ဆက်ခဲ့ခြင်းတွေနဲ့ လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ် ပြောခဲ့တာတွေဟာ အားလုံးကို နိုင်ငံရေးလုပ်စေချင်လို့ဆိုတာ မမှားပါဘူး။ ဒါ့အပြင် စကားပြောတိုင်း သူ့ကိုဝန်းရံပေးဖို့ အမြဲပါပါတယ်။ ဘေးလူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကြည့်ရင်တော့ ခုချက်ချင်းပဲ သူကိုယ်တိုင် ရှေ့ဆုံးကနေ အကောင်းဆုံးတွေ အကောင်ထည် ဖော်မယ်၊ နောက်က လိုက်လုပ်ကြပါ ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးပါပဲ...။ ကောင်းပြီး ဘယ်က စ ပြီး အကောင်ထည်ဖော်မှာလဲ ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်လာတာပေါ့...။
နိုဝင်ဘာ ၂၀ ရက်နေ့မှာ ဒုတိယ ပင်လုံ ဆိုတဲ့ ပရောဂျက် တစ်ခုနဲ့အတူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဦးဆောင်မယ် ဆိုပြီး မိန့်ခွန်းနဲ့ အစည်းအဝေးတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အရည်အချင်းရှိနေသူတစ်ယောက်၊ နိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့ အချိန်တန်နေသူ တစ်ယောက်၊ ဆုပေါင်းများစွာကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိနေသူ တစ်ယောက်ရဲ့ ပထမဆုံး နိုင်ငံရေး ခြေလှမ်းကြီးက ဒုတိယ ပင်လုံ ဆိုတဲ့ ပရောဂျက်ကြီးပါတဲ့။
ဒုတိယ ပင်လုံဆိုတော့ ပထမ ပင်လုံ ဆိုတာ ရှိလို့လား??? ခုမှ ကိုယ့်ဘာကို ပြန်မေးကြည့်မိပါတယ်။ မရှိပါဘူး။ ပင်လုံညီလာခံတော့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံခြားမှာ နှစ် ၃၀ ကျော် နိုင်ငံရေးပညာလေ့လာနေသူတစ်ဦ၊ အိမ်မှာ တစ်ယောက်ထဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ နိုင်ငံရေးလေ့လာနေသူတစ်ဦး၊ ဆုပေါင်းများစွာ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိနေသူ တစ်ဦး အနေနဲ့ ပင်လုံညီလာခံ ရဲ့ သဘော တရားကို မသိတာတော့ ရင်နာဖို့ ကောင်းလွန်းပါတယ်။
လူရှေ့သူရှေ့ရောက်မှ ဖင်ဖြဲပြတဲ့ ဖိုးသင်းမျှောက် လိုဖြစ်နေပါပြီ။ ပရိတ်သတ်အားလုံးက အာရုံစိုက်ကြီး ကြည့်နေမှ ဖင်ဖြဲပြနေသလိုပါပဲ။
အဲ့ဒီ ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ ဆိုတာကို ဘယ်သူတွေ ထောက်ခံလဲ ??? ထုံစံအတိုင်း NLD က အဖိုးကြီးတွေ၊ ပြည်ပရောက် ပညာမဲ့ ဒေါ်လာစားအတိုက်အခံတွေနဲ့၊ ပညာမဲ့ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား အတိုက်အခံတွေပဲ ရှိပါတယ်။ သူတို့ကို ဘာကြောင့်ထောက်ခံလည်း မေးကြည့်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ သေသေချာချာ မဖြေနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါဆို ပထမဆုံး ခြေလှမ်းပျက်ပြီလား??? မေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ထုံးစံအတိုင်း မှားတယ်လို့တော့ ဘယ်တော့မှ ဝန်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ မျက်စိစုံမိတ်ပြီး ဆက်လုပ်နေအုံးမှာပါပဲ။
အစိုးရဖက်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရွှေ့လိုက်တဲ့ ကလေးကွက် အတွက် အတော်လေးကို အူနိပ်ပြီး ရယ်နေပါပြီ။ နိုင်ငံရေး တကယ်လုပ်နေသူ၊ နာလည်တတ်ကျွမ်းသူတွေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင် ပါတီခေါင်းဆောင်များကလည်း စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်နေကြပါပြီ...။ ရွေးကောက်ပွဲကြောင့် နေရာ အတော်အတန်ရလာသော တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေကတော့ ပင်လုံမကလို့ ပင်လုံရဲ့ အဖေပဲလာအုံး လက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ အခြား ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားသူ အချင်းချင်းတောင် ပြင်းပြင်းထံထံ ရှုံ့ချ ကန့်ကွက်ခံနေရတာတောင် အစိုးရကို ပါဖို့ စည်းရုံးပါမယ်ဆိုပြီး အသံထွက်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခု ဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်စုကြည်လွတ်လာတာ ရက်ပေါင်း ၄၀ ကျော်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဘာဆို ဘာမှ ကောင်းတဲ့ ရလဒ် မရတဲ့ အပြင် ကန့်ကွက်မှုတွေ၊ ရှုံချမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ ရှေ့တိုးမရ၊ နောက်ဆုတ်မရ ဒုတိယ ပင်လုံဆိုတာကြီးပါပဲ။ ရှေ့မှာ ကျောက်ဆောင်၊ နောက်မှာ ကမ်းပါး ကြိုက်ရာကို သာ သွားဖို့ရှိပါတော့တယ်။ ရှေ့တက်လာမှာကို ကျွမ်းကျင်သူ အားလုံးက ကျောက်ဆောင်လို တားဆီး လက်မခံကန့်ကွက်နေပြီး၊ နောက်ဆုတ်ရင်တော့ သိက္ခာအားလုံး ကမ်းပါးထဲ ပြုတ်ကြကာ ဘယ်တော့ ပြန်တင် လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ အရှက်ပြေ သိက္ခာဆည်ရင်း ရှေ့က ကျောက်ဆောင်ကို အဓိပ္ပါယ်မရှိ ခေါင်းနဲ့ ပြေးဆောင့်ရုံသာ ကျန်ပါတော့တယ်......။
တစ်ခု ပြန်စဉ်းစာမိတာက နိုင်ငံခြားမှာ တကယ်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံရေးအတွက် လေ့လာဆည်းပူးမှုတွေလုပ်ခဲ့ရဲ့လား....။ အဲ့လို ရည်ရွယ်ချက် ကြီးကြီးနဲ့ လေ့လာချိန်တွေမှာ ဘာကြောင့် ဆုတွေမရပဲ၊ အကျယ်ချုပ်ကျမှ ဆုတွေရရတာပါလိမ့်?? နိုင်ငံခြားမှာ နှစ် ၃၀ နေရင်း ထွက်လာတဲ့ ရလဒ်တွေက ဘာတွေလည်း?? အလက်စန္ဒား အဲ့ရစ်နဲ့ ကမ်အဲရစ် ပဲ ထွက်လာတာလား?? အိမ်ထဲ မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အားယားနေချိန်မှာ တကယ်ပဲ နိုင်ငံရေးတွေ လေ့လာနေရဲ့လား?? ဘာတွေများ လုပ်နေပါလိမ့်...။ လုပ်ခွင့်မရလို့ မလုပ်ချိန်မှာ ရလဒ် မရှိရင် ခု လုပ်ခွင့်ရတော့ ဘာကြောင့် ကလေး ကွက်တွေ ရွေ့ရတာလဲ?? ၆၅ နှစ်အရွယ် ဆုပေါင်းများစွာရရှိထားတဲ့ နိုဘယ်ဆုရင်ကြီးရဲ့ အရည်အချင်းက ဒါအကုန်ပဲလား??????????
သတင်း (၁) (VOA) ဒုတိယပင်လုံကိစ္စ သဘောကွဲလွဲမှု ရှိ
By ဦးသားညွန့်ဦး ဗုဒ္ဓဟူး, 08 ဒီဇင်ဘာ 2010
အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ ခေါ်ယူဖို့ကိစ္စ အထမြောက် အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးက ဦးစီးဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာ အရေးကြီးတယ်လို့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေက ယူဆပါတယ်။ တဘက်မှာတော့ စစ်အစိုးရက အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ပေါ်ပေါက်လာမယ့် လွှတ်တော်ထဲမှာ ဆောင်ရွက်မှသာ လက်တွေ့ကျလိမ့်မယ်လို့ စစ်အစိုးရပိုင် သတင်းစာမှာ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ကိုသားညွန့်ဦးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံတရပ် ခေါ်ယူရေးကိစ္စမှာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေ အကြားမှာ သဘောထား မတူကြပါဘူး။ ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံတရပ် ကျင်းပဖို့ ဆိုတာကို စပြီး လှုံ့ဆော်နေသူတွေကတော့ CRPP ခေါ်တဲ့ ၁၉၉၀ ခုနှစ် အနိုင်ရခဲ့တဲ့ တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက အချက်ကတော့ အခုရှိနေတဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို တိုင်းရင်းသားတွေ လက်မခံနိုင်ကြတဲ့ အခြေခံအပေါ်မှာ စဉ်းစားရတာ ဖြစ်တယ်လို့ CRPP အတွင်းရေးမှူး ဦးအေးသာအောင်က ပြောပါတယ်။
“အထူးသဖြင့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို လက်မခံကြတာ များပါတယ်။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံအရ ဆိုရင်တော့ တကယ့် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်မယ့် အနေအထား မရှိဘူး။ မရှိတော့ တနည်းအားဖြင့် ပင်လုံသဘောတူညီချက်၊ ပင်လုံစိတ်ဓာတ် ဒါတွေကို အခြေခံပြီးတော့ ဆွေးနွေးဖို့ လိုပါတယ်။”
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီး တစုံတရာ လွှတ်တော်အမတ်နေရာတွေ ရခဲ့ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေး ပါတီတွေကတော့ တိုင်းရင်းသားတွေ ရပိုင်ခွင့်နဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် လွှတ်တော်ထဲမှာ ဆွေးနွေးအဖြေရှာဖို့ ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ စိုင်းအိုက်ပေါင်းကတော့ လွှတ်တော်ထဲမှာ ဘယ်လောက် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရမလဲ ဆိုတာကိုတော့ လွှတ်တော်တွေ ခေါ်နိုင်မှ သိမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ ပြောတာ လွှတ်တော်ထဲရောက်ရင် ဒါကတော့ စောပါသေးတယ်၊ ကျနော်တို့ ပြောလို့မရနိုင်သေးဘူးလေ။ လက်တွေ့ ကျနော်တို့ ပြောနေတဲ့ ဟာတွေကတော့ မရောက်သေးဘူးလေ။ လွှတ်တော်ထဲ ရောက်တဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့ကလည်း ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ ကိုယ် ရှိတာပေါ့။”
လွှတ်တော်ထဲဝင်မယ့် တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေ အနေနဲ့ကတော့ ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ ခေါ်ယူနိုင်ရေးကို မူအားဖြင့်တော့ လက်ခံကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့ ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိမရှိကို စိုးရိမ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးမောင်ကတော့ ဒုတိယ ပင်လုံ ခေါ်ယူနိုင်ရေးဟာ လက်ဝယ် အာဏာရှိသူ အပေါ်မှာ တည်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
“ဒုတိယပင်လုံကို ပထမဆုံး စတင်ကြွေးကြော်ရမယ့် ကာလက ၉၀ အလွန် သုံးလေးနှစ်လောက်မှာ ကြွေးကြော်ရမှာ၊ ၉၀ ပြည့် Elected Persons တွေက။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအလွန် ကာလလေးမှာ ပါလီမန် မပေါ်သေးခင်မှာ ခေါ်တယ်ဆိုတဲ့ ဟာကတော့ နောက်ကျနေပါပြီ။ သို့မဟုတ် ပါလီမန် ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ အစိုးရအဖွဲ့တခု ခိုင်ခိုင်မာမာ ပေါ်လာပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ခေါ်ခြင်းဟာ ကျနော်ထင်ပါတယ်၊ လက်တွေ့ အလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
“အခုအချိန်မှာ ဒုတိယပင်လုံလို့ ကြွေးကြော်ခဲ့ရင် ဘယ်သူက ဦးဆောင်ပြီး ခေါ်ယူမလဲ။ ထွက်လာတဲ့ Process ကို ဘယ်လို အကောင်အထည် ဖော်မလဲ၊ ဘယ်သူက အဲဒါကို အသိအမှတ် ပြုမလဲ၊ သူ့ရဲ့ တာဝန်နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်က ဘာလဲ ဆိုတာကို ကျနော်တို့ ဖြေရှင်းရမယ်လေ။”
ဦးအေးသာအောင်ကတော့ အခုလို ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ ခေါ်ယူတဲ့ကိစ္စမှာ တဖွဲ့ဖွဲ့ကို ထိပ်တိုက်တွေ့လိုတာ မဟုတ်ဘဲ လိုအပ်ချက်ကို ထည့်တွက်တဲ့ အဆိုပြုချက် ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“အာဏာရှိတာ မရှိတာထက် တိုင်းပြည်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ ဒါလုပ်သင့်တယ်၊ လုပ်ရမယ်၊ အဲဒီလို လုပ်ရမယ့်၊ လုပ်သင့်တဲ့ တာဝန်တခုကို ကျနော်တို့က လုပ်ဖို့ ကြိုးပမ်းတာဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို ကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာ ကျနော်တို့က ဘယ်သူ့ကို ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်တွေ့ဖို့၊ ဒီလို မဟုတ်ပါဘူး။ တိုင်းပြည်ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေ၊ ခင်ဗျားတို့လည်း သိပါတယ် တိုင်းရင်းသားများနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခ၊ ဒါတွေဟာ တိုင်းပြည်အတွက် စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေပါ။ ဒီတော့ ဒီအခြေအနေကို ပြေပြေလည်လည် ဖြစ်ဖို့ဟာ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဟာ အကောင်းဆုံးပဲ။”
ဒီကနေ့ထုတ် မြန်မာအစိုးရ သတင်းစာတွေမှာတော့ ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးပမ်းတာဟာ အပေါစား နိုင်ငံရေး စတန့်ထွင်တာ ဆိုပြီး ဝေဖန်ရေးသားပါတယ်။ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် လွှတ်တော်ထဲမှာပဲ ကြိုးပမ်းသင့်တယ်ဆိုတဲ့ ရေးသားချက်ကတော့ လက်ရှိ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့် တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ သဘောနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။
လွှတ်တော်ထဲဝင်မယ့် တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေနဲ့ လွှတ်တော်ပြင်ပ တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေ အကြားမှာ အခုလို ဒုတိယ ပင်လုံညီလာခံ ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတာ ကွဲလွဲချက် ရှိပေမဲ့ အရင် ပင်လုံညီလာခံမျိုး တိုင်းရင်းသားတွေအကြား ခိုင်မာတဲ့ သဘောတူညီချက်တရပ် ရအောင် ကြိုးပမ်းဖို့နဲ့ မြန်မာပြည်မှာ တိုင်းရင်းသား ပြဿနာ ရှိတယ်ဆိုတာကို လက်ခံတာချင်းတော့ တူညီတယ်လို့ ပြောရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။